Kodiarana maivana maivana amin'ny alàlan'ny alimina, kodiarana maivana, fanamboarana kodiarana Aliminum maivana sy orinasa | Hanvos
Kodiarana aluminium maivana, kodiarana maivana, kodiarana Aliminum maivana
zavatra Sombiny 2
Anaran'ny marika HANVOS QIEE
de -9 ~ 79mm
Warranty 3 taona farafaharatsiny
ara-nofo Aluminium 6061 T6
Size 19 ~ 24 santimetatra
Loko Doko.Brush / Poloney / Chrome
Amin'ny maha singa lehibe indrindra ny kodiarana, ny kodiarana kodiarana dia iray amin'ireo marika manan-danja indrindra handrefesana ny kalitaon'ny sy ny haavon'ny fiara manontolo.
Ho an'ny hub kodiaran-tsolika alikaotika dia manana toetra mampiavaka ny rafitra fitantanana haitao mandroso sy fitaovana fanaraha-maso sy fitsapana izy ireo, izay afaka mahatsapa famokarana be sy be indostrialy ary lehibe.
Alika fiara misy kodiarana fiara miaraka amin'ny hamafiny avo lenta, fanoherana ny havizanan'ny havizanana misy fiantraikany mahery vaika, kalitaon'ny hazavana mampihena ny angovo intertial, mampihena ny torque drive, ny haingam-pandeha, ny frein haingana, ny fiankinan-doha amin'ny hafanana ambony dia ny fanaparitahana ny hafanana ambany, ny fahombiazany, manalava ny androm-piainan'ny kodiarana .
Fitaovana manaitra ny alikaola mampihena, ny fihenan'ny tabataba, manatsara ny fampiononana ny fiara.
Azafady mba zahao ireto maodely manaraka ireto misy ny kodiarana alikaola. Ireo dia ampahany amin'ny hub misy kodiarana alikaola, koa azonay omena anao ny kodiarana amin'ny kodiarana araka ny habeny sy ny fitsaboana atoro anao.
Azontsika atao izany amin'ny alàlan'ny bobongolo na amin'ny alàlan'ny maching CNC. Afaka manome serivisy CAD ho anao koa izy ireo.
Raha misy liana amin'ny foiben-kodiarana misy anao, azafady mifandraisa aminay raha mila antsipiriany.
Ny vokatray dia manarona kodiarana alim-by vita amin'ny bus / kamio, kodiarana alimo vita amin'ny fiara mpandeha ary koa kodiarana vita amin'ny moto vita amin'ny moto.
Teo aloha: Kodiarana sandoka namboarina tamin'ny kodiarana vita amin'ny firaka
Manaraka: Kodiarana sandoka / kodiarana sandoka